Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY Pety Rakotoniaina: Nitsikera mafy ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina
Tsy izy intsony izao ataon’ny fanjakana izao hoy i Pety Rakotoniana izay filohan’ny antoko Tambatra. Tsy nitsitsy fitenena intsony ingahy Pety Rakotoniaina tamin’ny filazana ny tsy fahombiazan’ity fanjakana ity tamin’ny fanambarany tamin’ny televizionina tsy miankina iray tamin’ny alarobia faha 04 janoary 2017 lasa teo. Nolazain’i Pety tamin’izany ny tsy fandraisana andraikitra momba ny tsy fandriampahalemana eto Madagasikara. Noporofoiny tamin’ny ohatra nisy tany Ambatofinandrahana sy Ikalamavony izany tamin’ireo tsy fandraisan’ny zandary andraikitra na dia nolazaina ny fisian’ny fanafihan-dahalo aza ny tompon’andraikitra rehetra amin’ny antana-tohatra amin’ireo mpitandro ny filaminana any ambanivohitra ity hatrany Ikalamvony ka hatrany Fianarantsoa sy Ambositra ary Antananarivo. Nisy koa ny fanambarany ny amin’ny tsy fananan’ingahy Hery Rajaonarimampianina sy ny governemantany finiavana handray fanapahan-kevitra amin’ny fijerena ny fampandrosoana ny firenena. Feno kolikoly, fanodinkodinam-bolam-panjakana, halatra avo lenta ataon’ny mpitondra fanjakana sy ny olona manodidina azy dia samy nohazavainy avokoa. Nolazainy koa ny mahakasika ny tsy fihetezan’ny fanalavana ny fotoana hiasan’ny mpiasam-panjakana ho 65 taona. Hatramin’ny vola nosamborin’ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina tamin’ny mpamatsy vola dia voatsikera avokoa. Mahakasika indrindra ilay vola “10 miliara de dollar” voalaza fa azo tamin’ny volana desambra 2016 lasa teo iny. Volazan’ingahy Pety Rakotoniaina fa tsy miheno ny feon’ny vahoaka mihitsy ity fanjakana ity. Ny fandikana lalàna izay ataon’ny fanjakana amin’izao fotoana izao dia manaporofo hoy izy fa toa ny firenena tsy misy mpitondra eto Madagasikara.
Raha niteny momba ny fifidianana indray ingahy filohan’ny antoko Tambatra ity dia nanamafy fa hisy valifaty politika mahatsiravina eto Madagasikara amin’izao fizotran’ny raharaha ankehitriny izao. Tsy misy harofanina na kely aza misy eto amin’ny firenena. Tsy azo antoka intsony ny HCC (fahefana avo momban’ny lalàm-panorenana ) sy ny CENI (komity mahaleontena mikarakara ny fifidianana), izay miandany amin’ny filoham-pirenena. Maro ny fandikan-dalàna ataon’ireo andrimpanjakana ireo. Izany hoy ity mpanao politika ity no tokony hijerena harofanina maika amin’izao zavamisy eto amin’ny firenena izao. Tsy misy intsony olona mankasitraka ity fanjakana ity Manerana an’i Madagasikara.
Ambohimandroso: Olona telo matin’ny lozam-pifamoivozana
Nitrangana lozam-pifamoivoizana indray ny lalampirenena fahafito omaly alatsinainy 9 janoary, teny amin’ny kaominina Ambohimandroso. Fiara « Mercedes Sprinter » no nifandona mafy tamin’ny kamiao. Olona telo arak’izany no namoy ny ainy teo noho eo noho ity lozam-pifamoivoizana nahatsiravina ity. Nisy koa ireo olona naratra mafy tamin’izany. Raha tsiahivina dia maro tokoa ireo lozam-pifamoivozana niseho tamin’iny taona lasa iny tamin’ny faritra maro samihafa manerana ny Nosy. Mbola mitohy foana anefa izany amin’izao fiantombohan’ny taona izao ary ireo olona tsy manan-tsiny no mijinja ny vokany. Tokony ampiharina amin’ireo mpamily mahavanon-doza ny fepetra sy sazy faran’izay henjana indrindra mba isorohana ny tranga amoizana ain’olona toy izao.